Uyivula njani i-HTC bootloader yakho usebenzisa i-HTCdev | I-Androidsis
Vula i-bootloader Inani elikhulu leeTerminal zeHTCNgumoya kunye newebhusayithi yeHTCdev.
IHTCdev sisixhobo esikwi-Intanethi, eya kusinceda kwinkqubo yokukhupha i-bootloader yethu nokuVavanyelwa, Ukukwazi ukukhetha kwizinto ezininzi ze izixhobo ezihambelanayo ukusuka kuluhlu olwandayo.
Okulandelayo ndiza kukukhokela kwinkqubo oza kuyilandela kwiphepha elikhankanyiweyo ngasentla, kunye nesiphumo sokugqibela sokukhuphela isixhobo esifunekayo ivula i-bootloader Isiphelo sendlela esikhethiweyo.
Into yokuqala esiza kuyenza kukungena kwiwebhusayithi yeHTCdev kunye nokubhalisa, nje ukuba babhalisile baya kusithumela i-imeyile nge ikhonkco lokuqinisekisa, ekuya kufuneka sicofe kuyo sebenzisa ubhaliso lwethu.
Nje ukuba ukubhaliswa kusebenze, siya kuphinda singene kwifayile ye- HTVdev iwebhusayithi kwaye siya kuzazisa sisebenzisa eyethu igama lomsebenzisi kunye negama lokugqithaNje ukuba kwenziwe oku, sinokuqala ngesikhokelo somsebenzisi kweli phepha lewebhu.
uyisebenzisa kanjani inyathelo leHTCdev ngenyathelo
Ukusuka kwiphepha eliphambili le- Ifayile yeHTCdev, Siza kukhetha ukhetho endiliphawule ngombala omnyama, Vula i-Bootloader, Siza kubona isikrini njengale ndiyincamathisileyo apha ngezantsi.
Kule skrini intsha siza kukhetha ukhetho qalisa, engaphakathi kweqhosha eliluhlaza okweqanda.
Kule skrini intsha, siza kucofa utolo Khetha isixhobo sakho ukuze kubekho i lahla imenyu apho sinokukhetha imodeli yethu yeHTC.
Ukuba imodeli yethu ayizukufunyanwa kuluhlu olwehlayo, oku kuya kuthetha ukuba indlela ye Ifayile yeHTCdev ayihambelani nesiphelo sethu okwangoku.
Nje ukuba sikhethe i-terminal yethu, siza kucofa kwiqhosha Qalisa ukuvula iBootloader, emva koko iya kubonakala kuthi isikrini sokulumkisa Isilumkisa ngeziphumo zokuvula i-bootloader yethu nokuVavanyelwa.
Kuya kufuneka simakishe uphawu lwe- iibhokisi ezimbini zokutshekisha ukwamkela isaziso, emva koko ucofe kwiqhosha elivela ngezantsi.
Kwiphepha elilandelayo, Ifayile yeHTCdev, uya kusazisa kwibhokisi esekunene, zeenkqubo ekufuneka sizifakile ukuze isixhobo sokuvula esiza kukhuphela sisebenze ngendlela echanekileyo.
Izixhobo zezi I-SDK ye-Android, i I-Java Runtime Environment kunye Ukuvumelanisa i-HTCUkuba awunazo ezifakelweyo, kuya kufuneka uzifake ngaphambi kokuba uqhubeke nenkqubo yokukhuphela isixhobo sokuvula i-bootloader.
Iphepha lezixhobo kunye nokukhuphela iBootloader kwi-HTCdev
Nje ukuba yonke into ifakwe, sinokuqhubeka inkqubo yokuvula download isixhoboUkwenza oku, kuluhlu olutsha oluza kubonakala apha ngezantsi, siza kucofa kwiqhosha ukukhutshwa Esona silungele isiphelo sendlela esikhethiweyo ngaphambili.
Khetha ukhuphelo ngokwemodeli kwi-HTCdev
Khetha imodeli yokukhuphela isixhobo
Nje ukuba imodeli ikhethwe kuluhlu kwaye cofa kwiqhosha lokukhuphela, ifayile iya kuqala khuphela ngokuzenzekelayo, Siza kuyilinda ukuba igqibe kwaye sizoqhubeka nokuyenza, sikunika iimvume ukuba uyazicela.
Nje ukuba ifayile ekhutshelweyo ehambelanayo yenziwe, iwindow efana nale iya kuvela:
Ngoku siya kuphawula ibhokisi yokukhangela kwaye siza kucofa iqhosha Okulandelayo.
Kwiskrini esilandelayo, inkqubo isilumkisa ukuba kufuneka qhagamshela isixhobo nge-usb kwikhompyuter, ikwasinika izikhombisi ukuze masikuphephe nakuphi na ukumka kombane Ngexesha lokuvula, usicebisa ukuba akufuneki sibambe nantoni na ngexesha lenkqubo, kananjalo nokuba kufanelekile thintela ikhompyuter yethu ekulaleni okanye kwi-Stand by.
Ngaphambi kokuqhagamshela isixhobo sethu kufuneka sijonge kwi imenyu yezicwangciso ezifanayo, ukuba sisebenze ngokuchanekileyo ukhetho lwe ukususa iibhagi kwi-USB leyo ingaphakathi imenyu. useto, usetyenziso, phuhliso.
Nje ukuba konke oku kuqinisekiswe, siya kuqinisekisa ukuba yethu I-HTC ine-30% yebhetri, siya kuphawula ibhokisi yokukhangela Inkqubo yokuvula i-bootloader, kwaye siza kucofa kwiqhosha Okulandelayo.
Siza kufumana isikrini ujonge unxibelelwano nesiphelo, emva koko a inkqubela phambili yofakelo, kwaye ekugqibeleni isikrini esiya kusixelela ukuba yonke into igqibelele, ekufuneka sikhethe kuyo ukhetho Phuma.
Ngale nto sele ikho Siza kuba ne-bootloader yesiphelo sethu se-HTCUkufumanisa ukuba isixhobo sakho yenye yezo ziyahambelana, kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi ye- Ifayile yeHTCdev kwaye ujonge kuluhlu lwabo olubanzi lwezixhobo ezifanelekileyo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - IHTC Ville C entsha, ingxelo yezoqoqosho ye-One S
Imvelaphi Ifayile yeHTCdev
Iifoto - Ifayile yeHTCdev
Khuphela - I-SDK ye-Android, I-Java Runtime Environment, Ukuvumelanisa i-HTC
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Uyivula njani i-bootloader yenani leeterminal zeHTC ngeHTCdev
URafa indi sitsho
Molo, ungandixelela ukuba yintoni le nkqubo?
Phendula kuRafa Indi
UJuan Carlos G sitsho
Kwinqanaba lokukhuphela isixhobo sokuvula kwisiphelo sam; Ndingazi njani ukuba loluphi uguqulelo ekufuneka ndilukhuphile?
Phendula kuJuan Carlos G
Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi yeHTCdev,
ubhalisa kwaye ukhethe isiphelo sakho,
Kwinqanaba lokugqibela ufumana uluhlu
ngemodeli yesiphelo sakho kunye
Zonke iinguqulelo ezikhoyo.
UAbdedaim El Achhab El Kheffa sitsho
tgo ifowuni itshixiwe kumsebenzisi weorenji, ngaba ndingenza into ukususa isitshixo io ukufaka kwakhona i-Android kwi-0? Ngumnqweno we-htc onokuthi ndiphendule nceda
Phendula u-Abdedaim El Achhab El Kheffa
Molo, ndiwalandele onke amanyathelo, kodwa khange ndiwavule. Xa ndigqibile ndibeka oku: Ukuhlaziya i-hboot ukuvula ifowuni. Siyaxolisa ngokungalunganga.
Molo ekuseni, kwenzeke kum ngendlela efanayo nakuwe. Uyisombulule njani? UWilfire A3333.
USandra Petita sitsho
Ndijonge olu luhlu, kwaye okoko ndihlaziyileyo inguqulelo yesoftware, indinika inombolo, ngaba yileya ekufuneka ndijongile kuluhlu kwaye ndiyikhuphele?
kukhuselekile ukwenza oku?
Phendula uSandra Petita
isebenza ku sony ericcson phila wt19 ??
Molo, ndinomnqweno we htc c, ndazi njani ukuba yeyiphi iarom ekufuneka ndiyithathile ???
Molo, ndinemodeli ye-HTC cobalt PG05100. Andifumani mzekelo kuluhlu lweHTCdev. Ngaba oku kuthetha ukuba ayinakuvulwa?
christian dgz sitsho
Ndiyikhuphela njani i-ruu ye-htc exporer
Phendula kwi-dgz yamakristu
Hayi, ukuba ndivela eMexico, imodeli isisiqhwala, ayincedi, ndilahlekile.
Ndivela eMexico, andazi ukuba ukwazile ukuvula i-bootloader, imeyile yam 666black @@ Hotmail.es
molo, ndiza kwinqanaba 12 kwaye ukusuka apho andigqithisi, ndiyikopa kwaye akukho nto i-flashboot unlocktoken Unlock_code.bin
Ndingenza ntoni okanye iphi impazamo, enkosi
Molo, xa ndifika kwinqanaba le-9 lokukopa "i-fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin", ndifumana impazamo. Emva koko ndishiya ikopi-uncamathisela oko kubonakala kum
ukubhala 'ukuvula uphawu' ...
IFALEKILE (kude: ukuvula uphawu lwethokheni akuphumelelanga)
igqitywe tu. ixesha lilonke: 0.230s
Ukuba kukho umntu onempendulo, nceda uyipose.
Hi ndlela leyi, isisele sam siyi-htc x enye yezinto zokuqala (ii-4 cores kunye ne-tegra3)
Iifolda azange zenziwe, ingaba yintoni impazamo?
ayivuli bootloader !!! ukufaka inguqulelo yeROM ukuze ubenakho ukuyivula kamva ... zilumkele ezi zikhohlisi!
molo ndikwazile ukukhupha umnqweno we-htc uphume ungavulekanga kwimenyu efihliweyo kodwa isandixelela inethiwekhi ivinjiwe ndingenza ntoni
Molo ... Ndidinga uncedo nceda ... ndithintele ngempazamo i-bootloader ye-htc enye ye-m7, ndizama ukuyivula nge-htcdev kodwa ekugqibeleni xa ndiyithumela ndifumana ibug andazi ukuba ndenzeni ...
Ndizama ukuvula ifowuni kodwa ihlala indithumela ukuba ndiqalise imo kwakhona, ayindivumeli ukuba ndenze nantoni na ,,, kwaye indibeka ku *** RELOCKED ***
*** isilumkiso sokhuseleko *** Ndicela undixelele ukuba unesisombululo kwaye kufuneka ndenze ntoni ...
Ngaphambili ndiyabulela kakhulu ..